Xasan Guuleed Abtidoon - Wikipedia
Xasan Abtidoon wuxuu ahaa Madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti kaasi oo xilka hayay 27dii Juun 1977 ilaa 8dii Maajo, 1999.
Madaxwaynihii 1aad ee Jamhuuriyadda Jabuuti
27 Juun, 1977 ilaa 8 Maajo, 1999
Oktoobar 1916 ( 104Jir)
Lughaya, Dhulka Biritishka ee Soomaaliya
Sebteembar 2006 ( 1994–1995 jir)
Jabuuti, Jamhuuriyadda Jabuuti
Xisbiga Talada ee Dalka Jabuuti(RPP)
Wuxuu ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Gaarisa oo ku taal degmada Lughaya ee waqooyiga Soomaaliya. Wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray halgankii Jabuuti ee madaxbannaanida Faransiiska. Marka loo eego I.M. Lewis, "taageerada weyn ee codbixiyaha Faransiiska" Hassan Gouled wuxuu olole ka galay Mahamoud Harbi Farah oo ka tirsan xisbiga Midoobey Republicanine, kaasoo doonayey inuu ku biiro dhulka ay la wadaagto Soomaaliya deriska la ah. Markii la gaadhey doorashadii 23kii Nofembar 1958, xisbigii Mahamoud Harbi waa uu kharribmay iyada oo aqlabiyadda codaynta xisbiguna ay xisbigiisu guuleysteen. Maxamud Xarbi ayaa markii dambe ka baxsaday dalka Jabuuti, markii dambena wuxuu ku dhintay shil diyaaradeed.
Xasan Gouled wuxuu soo noqday kuxigeenka madaxa Golaha Dowlada laga soo bilaabo 1958 ilaa Abriil 1959. Hassan Gouled wuxuu kaloo kasoo shaqeeyey Golaha Qaranka faransiiska 1959-1962 iyo Guurtida Faransiiska 1952-1958. Waxaa laga adkaaday doorashadii baarlamaanka ee 1962-kii Moussa Ahmed Idriss, Xisbiga Dhaqdhaqaaqa caanka ah (PMP). Sannadihii 1960-naadkii, wuxuu hoggaamiyey Midowgii Dimuqraadiga ee Ciise. Waxay saxeex u tahay heshiiskii Carta bishii Sebtember 1963. Kadib wuxuu ahaa wasiirkii waxbarashada ee dawladdii uu hogaaminayey Cali Aref Bourhan 1963 ilaa 1967. Waxa si kooban loo xidhay bishii Luulyo 1967, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan Xisbiga Dhaqdhaqaaqa caanka ah (PMP). ). Waxaa loo doortay Golaha Territorial Assembly bishii Noofambar 1968 ka dibna wuxuu noqday Wasiirka Arimaha Gudaha. Markii dambe wuxuu noqday Raiisel wasaare intii u dhaxeysay May 1977 iyo July 1977.
Sannadkii 1974, Xasan Gouled wuxuu u yeeray cod isagoo la kaashanaya François Mitterrand. Wuxuu madax u noqday Ururka Midowga Afrika ee Madax-bannaanida (LPAI) oo la aasaasay bishii Feberaayo 1975 oo ay ku midoobeen isku dirka midowga Afrika iyo Ururka mustaqbalka iyo kala dambeynta. Xoghayaha Guud Axmed Diini.
Wuxuu noqday Golaha Golaha Maamulka 18 May 1977 waxaana loo doortay Madaxweynaha mustaqbalka ee Jamhuuriyadda Jabuuti 28kii Maajo oo loo magacaabay Golaha Wakiilada. Waxay ku sii ahaatay illaa 1999. Ka dib weerarkii lagu qaaday "Zinc Palm" bishii Diseembar 1977, waxay mamnuucday xisbiga ugu weyn mucaaradka, MPL, waxayna aasaaseen nidaam hal xisbi ah.
Sannadkii 1981, Xasan Gouled wuxuu dalka u rogay hal xisbi isagoo caddeeyay in xisbigiisa RPP uu yahay midka keliya ee sharciga ah. Ka dib bilowgii Dagaalkii sokeeye ee Jabuuti 1991, wuxuu ogolaaday afti dastuuri ah oo ku saabsan siyaasada xisbiyada badan bishii Sebtember 1992, iyada oo afar xisbi la ogolaaday. Doorashadii baarlamaanka ee la qabtay bishii Diseembar 1992, laba xisbi kaliya ayaa tartamay, RPP-na waxay ku guuleysatay dhammaan 65 kursi ee Golaha Qaranka. 4tii Feebarwari 1999, Gouled Aptidon wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fadhiisan doono waqtiga doorashada soo socota, shir aan caadi ahayn oo RPP uu Geelle u magacaabay murashax madaxweyne. Geelle wuxuu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee la qabtay Abril 1999.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xasan_Guuleed_Abtidoon&oldid=204355"
Last edited on 28 Luuliyo 2020, at 22:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 22:11.